REGA SINDHU AKA REKHA SINDHU အသက်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ သေခြင်းအကြောင်းနှင့်အခြားအရာများ - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
ရီယာစင်ဒ်ခေါ် Rekha Sindhu အသက်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ သေခြင်းအကြောင်းနှင့်အခြားအရာများ
နာမည်အမှန် Rega sindhu
အလုပ်အကိုင် မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ် 54 ကီလိုဂရမ်
ပေါင်မှာ 119 ပေါင်
မွေးနေ့ 16 ဇူလိုင် 1994
သေနေ့5မေလ 2017
သေမင်း၏နေရာ Vellore ခရိုင်ရှိ Naatrampalli အနီး Chennai-Bengaluru အဝေးပြေးလမ်းမကြီး
အသက် (၂၀၁၆ တွင်ကဲ့သို့) ၂၂ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Bengaluru, Karnataka, အိန္ဒိယ
ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ / နေရောင်နိမိတ် ကင်ဆာ
ဇာတိမြို့ Banaswadi, Bengaluru, Karnataka, အိန္ဒိယ
မိသားစု ဖခင် - Paulraj Sindhu
အစ်ကို - Anand Prakash
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် ဟောလိဝုဒ် Avatar
အကြိုက်ဆုံးဂီတသမား Arijit Singh က , Shreya Ghoshal , Nigam ၏အဆုံး , A.R. Rahman Alexa Goddard၊ Megan Davies၊ Conor Maynard၊ Enrique Iglesias
အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ Chennai ရှိပျံသန်းနေသောဆင် Aqua
Somilan Steak House, ဘင်္ဂလား
အကြိုက်ဆုံးကိုးကား 'မင်းအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆက်လေ့လာပါ။ '
ရေးရာ / ရည်းစား Abhishek Kumaran (ကောလာဟလ)
Rega Sindhu နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Rega Sindhu ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
Rega Sindhu သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
Rega သည်ချင်နာနီအမ်ရုသူအပါအ ၀ င်ကြော်ငြာများတွင်တွေ့မြင်ရပြီးတမီးလ်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
သူမသရုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ 'Fauzia Studio' ။
သူမသည်အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒူ၊ တီဂူ၊ တမီးလ်နှင့်ကန်နာဒါစသည့်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၇ မေလ ၅ ရက်၊ နံနက် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် Vindore ခရိုင်၊ Sunatrukukuttai၊ Naatrampalli, Vellore ခရိုင်၊ Sunambukuttai ရှိ Hanuman ဘုရားကျောင်းအနီးရှိအဝေးပြေးလမ်းမလမ်းပေါ်တွင်ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ သတင်းများအရကားမောင်းသူသည်ကားမောင်းနေစဉ်“ အိပ်ပျော်” သည်ဟုစွပ်စွဲခံရပြီးမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သတင်းများအရ Sindhu သည်ရှေ့ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ပြီးသူမချက်ချင်းပင်သေဆုံးခြင်းကြောင့်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ကားထဲတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားလူသုံး ဦး (Abhishek Kumaran (၂၂ နှစ်)၊ Jayankandran (၂၃ နှစ်) နှင့် Rakshan (၂၀) ​​တို့ကပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး Chennai ရှိဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်။ ရေဂါစင်ဒူ! သူမအတိတ်မှဓာတ်ပုံအချို့
Mona Singh နဲ့ Karan oberoi
sushant Singh က rajput အမြင့်ပေ
priyanka Kumari အလှမယ်အိန္ဒိယ 2017
tu sooraj အဓိက saanjh piyaji သွန်း
Baal veer သရုပ်ဆောင်များကိုအမည်ရင်း